Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 31)
Qalabka xiga ee Xiaomi oo leh USB-C iyo Android 5.0
Terminaalka soo socda ee soo saaraha Shiinaha ee Xiaomi wuxuu hoos tagi lahaa Android 5.0 Lollipop iyo isku xiraha USB-C.
Tani waxay noqon doontaa Huawei Honor 7 iyo Honor 7 Plus
Dhowr maalmood ka hor shirkadda Shiinaha ayaa soo bandhigtay astaanteeda cusub, Huawei P8 haddana waxaa jira sawirro sir ah oo laga helay xarunteeda xigta ee Honor 7.
Mi note Pro wuxuu imaan doonaa 6-da Maajo suuqa Shiinaha
Mi Note Pro ayaa suuqa soo gali doona 6-da bisha May. Dabcan, hadda Xioami Mi Note Pro waxaa laga heli karaa oo keliya Shiinaha.
Samsung Galaxy J5, shaashad 5-inch ah oo leh Snapdragon 410
Qalab cusub oo ka mid ah nooca loo yaqaan 'Galaxy brand' ayaa waxaa ku soo daatay tijaabooyinka waxqabadka ee terminalka, magaceeda waa Galaxy J5.
LG wuxuu ku faanaa shaashadda LG G4 muuqaal cusub
Waxaa jira maalmo yar ilaa calanka soo socda ee soo saaraha LG, LG G4 loo soo bandhigo dadweynaha.
Sony Xperia Z4 wuxuu yeelan doonaa jir bir ah iyo dareeraha sawirka faraha
Xanta cusubi waxay soo jeedineysaa in Sony Xperia Z4 uu dhexgeli doono dareeraha faraha ee badhanka awoodda taleefanka
UleFone Be Touch, terminal shiineys ah oo la mid ah iPhone 6
UleFone waa shirkad Shiineys ah oo aan si fiican looga aqoon meel ka baxsan suuqa Aasiya, in kasta oo ay shirkaddu dooneyso inay ku ballaariso suuqyo cusub oo leh terminaallo cusub.
Huawei wuxuu ku bilaabayaa P8max shaashad dhan 6,8-inji iyo dhaldhalaal aad u dhuuban
Huawei P8Max waa nooca "gabow" ah ee cusub ee 'P8', oo ah sumcadda soo saaraha Shiinaha ee sannadkan 2015
Kani waa Huawei P8 Lite
Shirkadda Huawei ayaa maanta soo bandhigtay calankeeda cusub ee P8. Laakiin sida muuqata shirkaddu waxay ku shaqeyneysaa qaab jaban oo ka hooseeya magaca Huawei P8 Lite.
Shirkadda Shiinaha ayaa maanta ugu dambayntii soo bandhigtay astaanteeda cusub, Huawei P8. Terminal-dhamaadka-sare ah oo dhigaya baarka aad u sarreeya.
Huawei Watch ayaa imaan doonta bartamaha sanadka
Huawei Watch, waa mid ka mid ah dharka la xiran karo oo leh naqshad casri ah qaabkaas wareegsan, wuxuu ku dhufan doonaa bandhigyada bartamaha sanadka
Xiaomi Redmi Note 2 oo leh shaashadda 1080p iyo processor-ka MediaTek MT6795
Xiaomi Redmi Note 2 ayaa berri loo soo bandhigi karaa dadweynaha. Redmi Note 2 waxay lahaan doontaa shaashadda xallinta 1080p iyo processor-ka MT6795.
Samsung si qaldan ayaa loo xisaabiyay, iibka Samsung Galaxy S6 Edge ayaa aad uga wanaagsan sidii la filayay
Sida laga soo xigtay wargeys Kuuriyada Koonfureed ah, iibinta Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge aad ayey uga badan yihiin filashooyinka
Honor 4X wuxuu si rasmi ah Spain ugu yimid qiimo jaban: 200 euro
Honor wuxuu soo diray war-saxaafadeed uu ku ogeysiinayo in Honor 4X hadda laga heli karo Spain qiimo aad u qurux badan: 199.99 euro
Galaxy A8, saldhiga cusub ee Samsung uu ku leeyahay A range
Soo saaraha Kuuriya ayaa diyaarin lahaa waxa noqon doona terminal-keeda cusub, Galaxy A8, oo ah terminaal heerkiisu sareeyo.
Cyanogen OS 12 oo hadda loo heli karo OnePlus One [ZIP Download]
Ku soo dejiso Cyanogen OS 12 cusbooneysiinta ZIP-gaaga 'OnePlus One' waxaadna kuheleysaa wanaagga iyo faa'iidooyinka Lollipop taleefankaaga Android.
LG G4: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaan la bilaabin (Minisite xaday)
Hackers-ka Evan Blass ayaa shaaca ka qaaday inuu helay minis yar oo loogu talagalay in lagu soo bandhigo LG G4 oo maanta aan ku tusayno shaashadaha.
ZTE Nubia Z9 terminal kale oo shaashad qalooca leh
Soo saaraha Shiinaha ee ZTE wuxuu rabaa in terminaalkiisa uu ahaado mid casriyeysan marka ay timaado hal-abuurnimo waana taas tan keentay in ZTE Nubia Z9 ay ku dareyso shaashad qalooca.
Samsung Galaxy S6 wuxuu ku gudbaa tijaabada adkeysiga xad dhaafka ah Tesla Model S
Nooca cusub ee loo yaqaan 'Galaxy S6' ayaa wajihi doona maalmaha soo socda tijaabooyin adkaysi oo kala duwan sida inuu ku kaco Tesla Model S
LG G4, midabyo cusub, kamarad awood badan iyo sawirro badan oo xaday
Ma jiraan wax lama filaan ah oo ku saabsan waxa shirkadda Kuuriya laga rabo inay ku soo bandhigto LG G4. Thanks to daadashada waxaan ogaan karnaa wax walba oo isaga ku saabsan.
HTC One M9 waxay heshaa cusbooneysiin si weyn u hagaajineysa waxqabadka kamaradda
HTC America waxay xaqiijineysaa imaatinka cusbooneysiinta HTC One M9 kaas oo hagaajin doona tayada sawirada dhammaan xaaladaha
Tani waxay noqon doontaa naqshadda Huawei Ascend P8
Sawirada saxaafadda iyo astaamaha farsamada ee Huawei Ascend P8 waa la sifeeyey, marka lagu daro Ascend P8 Lite, nooca yare ee titan cusub ee Huawei
Ma jeceshahay HTC One M9 Plus? Hagaag, waxay kusii jirtaa suuqa Aasiya
Ilaha HTC waxay xaqiijiyeen in HTC One M9 Plus uusan gaari doonin suuqa Yurub tan iyo markii uu ku wajahan yahay Aasiya iyo gaar ahaan dadka isticmaala Shiinaha.
Dhibaatooyinka ugu horreeya ee Samsung Galaxy S6: iftiinka LED-ka ee unugyada qaarkood weligood damin
Dhowr isticmaale ayaa ka warbixinaya dhibaatooyinka ugu horreeya ee Samsung Galaxy S6. Sababta? Tooskaagu waligiis ma demin
Dib u eeg Doogee Ibiza F2, 64-bit QuadCore kaliya $ 129,99
Halkan waxaan kaaga tagaynaa Dib-u-eegista dhameystiran ee Doogee Ibiza F2, terminalka cusub ee shirkadda asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha oo leh processor 64-bit ah QuadCore iyo kaliya 125 euro oo ah RRP.
OnLeaks waxay muujineysaa wax badan oo Xperia Z4 ah
Daadinta kale waxay muujineysaa sida calaamadda cusub ee Sony u ekaan doonto. Xperia Z4 waxaa loo muujiyey inay tahay terminal aad muuqaal ahaan ula mid ah Xperia Z3.